Faahfaahintii ugu dambeysay ee ku saabsan malaayiin Dollar oo laga dhacay garoonka Johannesburg - Hablaha Media Network
Faahfaahintii ugu dambeysay ee ku saabsan malaayiin Dollar oo laga dhacay garoonka Johannesburg
HMN:- Ciidamo hubeysan oo ku labisa dareeska ciidamada Booliska Koonfur Africa ayaa lasoo sheegay inay dhaco iyo boob u geysteen garoonka Caalamiga ah ee Johannesburg.
Ciidamadaan burcadda ahaa la garoonka ka dhacay lacag badan oo ku jirto konteenar yaalay garoonka dhexdiisa, waxaana la isku khilaafay cadadka lacagta ay ciidamadaas ka qaateenka garoonka.
Waxay wararka rasmiga ah sheegayaan inay gaareyso lacagta halkaas laga dhacay Malaayiin Dollar oo laga lahaa dalal ka duwan.
OR Tambo oo ah shirkadda maamusho garoonka ayaa xajiisay dhacdadaan ka dhacday garoonka ugu mashquulka badan guud ahaan dalka Koonfur Africa.
Bayaan ay soo saartay shirkaddaas ayey ku sheegtay inaysan jirin wax rasaas ah oo dhacday intii uu socday boobkaan, sidoo kalana waxay xaqiijisay inay ciidamadii dhaca geystay si nabadgelyo ah isaga baxsadeen goobta.
Ciidamadaan hubeysan ayaa si lama filaan ah gudaha ugu galay meelo aan garoonka laga ogoleyn in la galo taasoo ah meel lagu keediyo lacagaha iyo qalabka kale ee garoonka loo isticmaalo.
Ciidamadaan ayaa markii ay qaateen lacagta waxay garoonka ka wateen gaari yar oo ay ku baxsadeyn lacagtana isaga ayey saarteen.
Booliska Koonfur Africa ee la aaminsan yahay inay si gaar ah u tababaran yihiin ayaa ka gaabsaday inay saxaafadda uga warbixiyaan qaabka ay arrintaan u dhacday.
idaacada ENCA ayaa faafisay codka u hadashay booliiska, oo lagu magacaabo Athlenda Mathe taasoo ka dhawaajiyey inaysan hadda ka warbixin karin tirada ay la eg tahay lacagta la dhacay iyo qaabka ay u dhacday.
Ciidamadaan oo watay gaari yar ayaa waxaa istaajiyey ilaalada sida gaarka ah loo leeyahay ee ilaaliso garoonka waxayna ku wargeliyeen inay yihiin booliska oo arrimaha gaar ah garoonka ugu socdo sidaas ayaan loo fasaxay.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa hadda sheegayo inuu garoonka sidiisii caadiga aheyd kusoo noqday ma jirto wax dhibaato ah oo hadda ka jirto marka laga reebo lacagta tirada badan ee laga qaata.